एमालेले थुन्यो कोमल ओलीको मुख, उम्मेदवारी फिर्ता, एमालेले कति दिन तयार भए त ? – Sanghiya Online
एमालेले थुन्यो कोमल ओलीको मुख, उम्मेदवारी फिर्ता, एमालेले कति दिन तयार भए त ?
Posted on : November 6, 2017 November 6, 2017 - No Comment
काठमाडौं । एमालेले टिकट नदिएपछि दाङ क्षेत्र नं. ३ मा प्रतिनिधि सभाका लागि स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएकी कोमल ओली आर्थिक प्रलोभनमा परेको खलासा भएको छ ।
एमालेका नेता शंकर पोरखेलले ओलीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर उम्मेदवारी फिर्ता गराउन सफल भएका हुन् । स्रोतका अनुसार ओलीले पोखरेलसँग रुपियाँ लिएकी छिन् । तर, कति लिएकी हुन् भन्ने खुल्न सकेको छैन । शंकर पोखरेललाई उनकी पत्नी सुजिता शाक्यले चुवना खर्चका लागि आफ्नो एनजिओमार्फत चीनबाट पैसा ल्याइदिएको एक नेताले बताए ।
कोमल ओलीको उम्मेदवारीले एमालेलाई घाटा पुग्ने र त्यसको असर आफूलाई पनि पर्ने भएपछि एमाले नेता पोखरेलले पैसा दिएको एकजना एमालेका नेताले बताए । ‘कोमल ओलीलाई शंकर पोखरेलले पैसा दिएर उम्मेदवारी फिर्ता गराउन दवाव दिएको थाहा पाएका छौँ’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एमालेका एक नेताले भने, ‘कोमल ओलीको अब हैसियत छैन । उहाँ एमालेमा बसिरहनुको अर्थ छैन ।’
कोमल ओलीले एमालेले आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने आश्वासन दिएको दाबी गरेकी छिन् । ओलीले आफू निकटका नेताहरूसँग राष्ट्रिय सभामा लैजाने सहमतिपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिएको बताए पनि भित्री कुरा आर्थिक लेनदेनको रहेको बताइएको छ ।
एमालेले ओलीलाई कुनै पनि हालतमा अवसर दिने पक्षमा छैन । एमालेमा राष्ट्रिय सभा तोकर बस्नेहरू एक सयभन्दा धेरै नेताहरू रहेका छन् ।
अख्तियारले समात्न थाल्यो ‘ठूला माछा’, पूर्व आईजीपीदेखि मुख्य सचिवसम्म फन्दामा
नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायत तीन हजार जनतासँगै वीरगञ्जका चर्चित उद्योगपतिहरु फोरम नेपालमा प्रवेश
सशस्त्र द्वन्दमा सेनाको कर्तुत : महिलालाई नांगै बनाएर कुकुर संग इज्जत लुट्न लगाउने
कालापानीको जवाफ मधेशीलाई गोलि ठोकी त्रुटिपूर्ण संबिधान बनाइ दिपावली गर्नेले दिन्छ -उपेन्द्र
मात्रिका यादवले गरे कमाल, उपभोक्ता लुट्दै आएका उद्योगी र व्यवसायीको भागा भाग
गगन थापा र राजन भट्टराई एक अर्कालाई भारतीय दलाल भन्दै चुनाबी प्रचारमा तिब्रता दिदै
नेकपा एमालेले धोका दिएको भन्दै माओवादी केन्द्रद्वारा गठबन्धन टुटेको घोषणा